Pluto TV inouya kuUbuntu Kubata muchimiro chewebhuapp | Linux Vakapindwa muropa
Ndichangopfuura mwedzi wadarika, Pluto TV yakamira muSpain. Kune avo vachiri kusaziva kuti chii, idzi ipuratifomu migero yavo, yemahara uye iyo yatinogona kuona online, kwatinoda web browser (hazvidi kushandisa Widevine) kana Anwendung kuti ugone kunakidzwa ivo. Kubva nhasi Zvita 2, app iyoyo yasvika paOpenStore, yepamutemo Ubuntu Kubata chitoro, asi iri webapp.
Kushandisa webapp kuri nani pane kuzviita kubva kubhurawuza, nekuti inobvisa zvisina basa zvikamu kubva mairi uye inotarisa pane izvo zvinodiwa chete. Kutaura nezve browser, iyo Morph Bhurawuza Ubuntu Touch yachinja zvakanyanya mumavhiki apfuura, iine icon nyowani uye chinongedzo chakafanana neicho chinopihwa neFirefox yeChristmas kana Chrome pane zvatakaona kusvika zvino. Uye zvakare, ivo zvakare vakagonesa kumhanyisa kwehardware pane mamwe majaira, izvo zvinoita kuti mupumburu uwedzere kuteerera.
Pluto TV inowanikwa paOverStore
Dambudziko, sekuratidzira kwatakaita mumusoro wenyaya ino, nderekuti haishande zvakanyanya, zvirinani paPineTab. Uye ini handifunge kuti dambudziko riri kubva kuapp, asi kubva pamipimo iyo piritsi ichinayo. Kana iwe ukaivhura, iyo app ndiyo inotarisirwa pairi: rakaparadzaniswa bhurawuza hwindo iyo yatinogona kushandisa ku "tarisa" Pluto TV, uye ini ndakaiisa mune makotesheni nekuti izvozvi, zvirinani paPineTab, iri kugara ichizvicheka yega .
Pane dambudziko rinozivikanwa rinoita kuti Internet indaneti kuburikidza neWiFi isagadzikane, kunyangwe isu tiri padhuze neiyo router. Pamwe, pavanogadziridza izvi, isu tinokwanisa kutarisa Pluto TV uye mamwe emahara ekushambadzira masevhisi pasina izvi kucheka. Asi chokwadi ndechekuti kune app, uye vashandisi veUbuntu Kubata vanogona kuishandisa, kunyangwe ndichifunga kuti avo vanozogona kunakirwa zvakanakisa ndevaya vePinePhone inotora nguva yakareba mukusimudzira uye ine Hardware isiri nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pluto TV inouya kuUbuntu Kubata muchimiro chewebhu webhu, asi zvinhu zvinofanirwa kugadzirisa (zvirinani paPineTab)